Nlekọta na-azụ maka anụ, dịka azụmahịa: ebee ga-amalite, ma ọ bụ uru iji mebe ugbo ala, tụọ ụzọ isi zụlite azụmahịa maka ndị na-amalite n'ụlọ. - Ugbo - 2019
Ịzụ ehi (oke ehi) n'ụlọ maka ịmalite bụ azụmahịa na-aba uru, ebe o kwere omume inye ngwaahịa na ezinụlọ, na ihe ndị ọzọ ịzụta ma nweta uru. Amalite ndị ọrụ ugbo na-eche na ehi ndị na-azụ anụ maka anụ dị ka azụmahịa bụ usoro nsogbu ma dị oke ọnụ.
Ma na nzukọ kwesịrị ekwesị na nrube isi na ihe ndị a chọrọ maka nlekọta, azụmahịa ahụ ga-eme nke ọma, na-eweta ego. Ka anyị hụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bara uru idebe ha maka anụ.
Atụmatụ nke ikpe ahụ
Ihe omume nke ebe kwesiri
Anyị na-ahazi ụlọ ahụ
Kedu otu esi ahọrọ anụmanụ?
Na-eto eto zụrụ ahịa
Ị chọrọ imewe?
Ntosi aka: imefu na uru
Ebee ka ị ga-amalite?
Nzukọ mbụ nke azụmahịa ọ bụla chọrọ ịme ihe ụfọdụ. N'ime ha - nyocha zuru oke nke ike ha na ike ha (ịzụlite nwa na-achọ ntinye na oge). Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche ọnọdụ nke mpaghara a, ebe ọ bụ na ịzụ anụ ndị buru ibu chọrọ nnukwu ebe. Ịhazi usoro na obodo ime obodo agaghị ekwe omume.
Mgbe ị na-eme atụmatụ ntanye anụ n'ime ụlọ nri na ụlọ ahịa ga-achọ ndebanye aha azụmahịa.
Ajụjụ dị mkpa nke na-ekpebi ihe gbasara ikpe ahụ: "Gịnị ka onye ọrụ ubi ahụ na-ahọrọ: ịzụta ụmụ anụmanụ na-eto eto ma ọ bụ ịzụlite ụmụ ehi?". Ịzụta ndị mmadụ na-ewepụ ọtụtụ nsogbu:
ị nweta mkpụrụ ehi (ma ọ bụ ịzụ ehi).
nhazi ụlọ dị iche.
Nyere aka! Ka ehi wee nweta ibu, ọ dị mkpa ịmepụta ọnọdụ dị mma maka njide. Ihe ndị e ji kee ihe ga-adabere n'uto na mmepe.
Debe ụmụ ehi naanị n'ọhịa gụrụ. Mgbidi kwesịrị inwe ala siri ike na nke a tụkwasịrị obi. Nhicha edo kwa ụbọchị. A na-atụ aro ka ị kpoo ala ahụ na ahịhịa siri ike, na n'oge oge ọkụ - kpocha ya na mmiri na-agba agba.
Ọrụ ahụ bụ kpọmkwem. A ghaghị ịkụzi ụmụ ehi ruo afọ ụfọdụ, wee gbuo ha (ma ọ bụ na-ere ndụ dị arọ). Akụkụ nke ikpe ahụ - obere ego.
Ihe isi ike ndị a na ejikọta oge na mgbalị iji lekọta ụmụ anụmanụ. Ịzụ ahịa anụ ngwaahịa anaghị ebili: nnukwu ahịa na-enye gị ohere ire ngwa ngwa.
N'etiti atụmatụ nke oke ehi bụ ndị na-esonụ:
Nhọrọ ziri ezi nke leash. Ụmụ anụmanụ ga-akwa ụdọ dị mkpa. Otu nhọrọ kwesịrị ekwesị bụ ígwè ígwè nke welded na onye ọ bụla ọzọ yiri mgbaaka. N'okpuru ụyọkọ nke ehi ahụ ị chọrọ itinye otu ákwà iji belata ihe ọjọọ na metal ahụ.
Mgbe na-eto eto kwesịrị ịṅa ntị n'àgwà onye ahụ. A ghaghị ịjụ ndị na-eme ihe ike, ndị na-enupụ isi na ndị dị mfe n'ihi na ọdịnaya ha adịghị mma.
Iji mee ka e nwee nchebe ma dị mma, anụ ahụ ga-etinye mgbanaka n'ime imi ya na ọnwa 12.
Oge nke ibu nke anụ maka igbu egbu sitere na ọnwa 12 ruo 20. Ebu arọ nke oke ehi bụ 350 kg. Ọnụ anụ na nrite uru ga-adabere na ọnọdụ nke mpaghara ọ bụla. Ikpe ahụ ga-akwụ ụgwọ n'ime afọ 1-2. Ọrụ ga-aba uru ma ọ bụrụ na emejuputara ya. Ịmalite ihe dị otú ahụ dị mkpa maka ndị na-atụghị egwu ịrụ ọrụ anụ ahụ.
NDỤMỌDỤ! Ọ bụrụ na ị na-eburu anụ ahụ gaa na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ego ga-adị elu karịa ire ere ndị ahịa.
Ebe kachasị mma maka gobies na-ebu anụ bụ ibé nke nwere nnukwu ebe na-enweghị ala. Nke a nwere ike ịbụ obere ugbo, ụlọ ochie, ebe ndị ọzọ na-akọ. A ghaghị inwe ebe maka nzukọ nke ụlọ akwụkwọ na anụ ụlọ.
N'oge okpomọkụ, ụmụ anụmanụ ga-ebido ịrụ ọrụ dị arọ - nke a ga-achọ ịgagharị kwa ụbọchị (idebe ụlọ ahịa ahụ ga-emewanye ike na-akpata ọrịa). Na nso n'ọba kwesịrị ịbụ ala ahịhịa ma ọ bụ ubi ubi.
Mpaghara na 1 isi - 10 sq.m. (gụnyere ebe ịchekwa nri). Maka owuwu nke barn dị mma brik ma ọ bụ slab (ihe dị ọnụ ala ma dị elu). Site n'echiche akụ na ụba, ọ ga-abara gị uru ịgbazite ihe niile dị gị mkpa.
Anụ anụ bụ anụmanụ dị ọcha, ya mere ọ ghaghị ịba ọba ahụ ka ọ dị mfe ọcha. A ghaghị ịkwụ ụgwọ nlezianya na mpaghara ahọrọ: ọ gaghị ejikọta mmiri.
Ihe omume nke ụlọ kwesịrị ekwesị bụ okpomọkụ (ọ bụghị ala karịa ogo asatọ), ezigbo ventilashị na ohere ikuku. N'okpuru usoro nkwekọrịta iwu - ha na-akpalite ọrịa. Na otu ìgwè nke ihe karịrị isi 10, ọ ka mma ịmepụta usoro ịzụta mmiri na nri.
Ọ dị mkpa na ụmụ anụmanụ nwere ohere ọ bụla na ndị na-azụ nri na ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ (ma ọ bụ ekwesighi itinye ha n'ala, ebe dị elu bụ 8-10 cm si n'ala dị larịị). Ndị ọrụ ugbo na-eji ntụ na-ehicha ikuku n'ime ụlọ ahụ - ọ na - emetụta amonia na gas. Ị nwere ike wụsa ya na egwu ahụ ma ọ bụ daa n'ụra.
Mgbe ị na-ahọrọ ìgwè ị ga-achọ ịtụle ọtụtụ ihe dị mkpa:
Ndụ dị arọ: Nwa ehi ahụ na-agbaso ụkpụrụ ndị ọkpụkpụ?
Ogo nke mmepe, usoro iwu zuru oke, njedebe nke ntụpọ ma ọ bụ adịghị ike.
Nwa ehi na-arụ ọrụ (nne na-arụ ọrụ na nna dị arọ).
Na nhọrọ nke ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị ịṅa ntị na ibu (ezigbo 90-100 n'arọ) na afọ.
Ọ ka mma ịzụta ngwaahịa na-eto eto na ugbo ndị pụrụ iche. Ị nwekwara ike ịzụta ụmụ ehi site n'aka ndị na-azụlite ozuzu.
Gobies nke ara ehi nwere ọnụ ala dị ntakịrị mgbe ha na-azụrụ (ruo ọnwa atọ ha chọrọ iji mmiri ara ehi).
Nkwanye! Ọ ka mma ịzụta ndị mmadụ na-agbanweworị na njiri onwe ha na ahịhịa. Ịzụta ụmụ ehi dị mma na Mee, mgbe ahụ site na ọdịda n'afọ ọzọ, ọ ga-ekwe omume inye ego.
Ụfọdụ atụmatụ nke ịkụ mkpụrụ na oge ịkwụ ụgwọ na-adabere na ụdị. Ndị ọrụ ubi na-akwado ịzụta azụ na-eto ngwa ngwa, ma echefula banyere àgwà anụ ahụ.
Tupu ị na-ahọrọ ụdị, ị ga-achọ ịma onye nke ọ bụla kwesịrị ekwesị maka idebe na mpaghara ebe obibi (ọ bụrụ na ndị na-eburu ibu gobies agaghị ebikwa na mpaghara ụfọdụ). Ndepụta nke ụdị kachasị mma:
Enwere ike ịchọta ịmatakwu banyere ìgwè ahụ n'isiokwu ndị na-esonụ:
Ụdị na-edozi ahụ.
A ghaghị ịhapụ ụmụ anụmanụ na-eto eto dị iche iche site na oke ndị okenye (maka ụmụ ehi, a ghaghị wuru ụlọ dị iche iche). A na - enyekwa ehi na ehi aka - ya mere àgwà nke ụmụ nwoke ga - adị jụụ karị.
Ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-ehi ehi n'èzí n'oge ọkọchị, ma ọ ga-adị mkpa ịkwado ụlọ ntu ahụ dị iche iche. Mkpụrụ anụ na-ewepụta ugboro 3 n'ụbọchị, ozugbo nri.
Mkpa! A ghaghị ịchịkwa mpi nke hoofuru. 2 ugboro n'afọ ka ị chọrọ ikpochapụ ma belata mkpịsị ụkwụ.
Uzo nke ije ije kwesiri ijiko ihe ndi kachasi ike. A na-ahapụ ya ikwe ka ndị okenye na-eto eto banye n'okporo ámá nwere mkpanaka pụrụ iche. A na-etinye mkpanaka ahụ na mgbanaka ọhụụ nke onye ọ bụla. Ịkwadoghị oge ọ bụla na-ejegharị na nwanyị ma ọ bụ na-eto eto.
Na gobies na-arụpụta, nchịkọta anụ ahụ adịghị ihe dịka pasent 70. Iji mezuo nke a, ọ dị mkpa iji nye nri ọkụ. Sen na ihe ọṅụṅụ na-esi ísì ụtọ anaghị arụ ọrụ dị elu: na nri ga-ebu ngwaahịa dị otú ahụ:
carrots na poteto (ụmụ ehi ga-esi sie ma gwerie ya);
Ịtinye ụtụtụ ga-ekwe ka ozu ahụ mejupụta ngwongwo nke vitamin na mineral. Ndabere nke nri na oyi - hay, nri anụ na mgbọrọgwụ kụrụ. N'oge ọkọchị, ihe kachasị mma bụ ahịhịa na-adị ụtọ. Ndị mmadụ n'otu n'otu ga-etinye ọ dịkarịa ala awa iri na iri na atọ.
Kedu ka esi eme ehi? Nwa ehi a na-azụ ehi na-akwaba ruo 50 cows kwa afọ. Ị nwere ike idebe ya n'ubi gị ma ọ bụ jiri ọrụ (njikọ ntuziaka - a na-edu ehi). Mgbe ọ na-eme ka nwoke ma ọ bụ nwanyị dị iche iche na-aga, ọ na-agafe ma ọ bụ ịzụ nwa. N'etiti ndị na-ahụ maka ịzụlite ozuzu:
akwụkwọ ntuziaka (ntanye n'okpuru akara);
Lezienụ anya! Taa, a naghị eji usoro mmepụta nke okike eme ihe.
Nri ire ere bụ azụmahịa bara uru nke ga-enye ego nkwụsị. Ụkpụrụ ọrụ bụ isi bụ ịgbazite nkata ma zụta obere ngwaahịa, ịzụ ya na ire ahịa ọzọ.
Maka nkwụghachi azụ, ọnụ ọgụgụ nke ìgwè ehi ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 10 isi. Ọ dị ezigbo mkpa ka ịmepụta ụlọ obibi kwesịrị ekwesị na ịnọgide na-eri nri kwesịrị ekwesị maka ụmụ anụmanụ. Ruo ihe mgbaru ọsọ iri na ise ka a ga-edozi n'onwe gị, ihe karịrị iri na ise - ga - achọ ndị ọrụ gọọmentị.
Ndebanye aha oru bu ihe di mkpa maka ahia na onunu. Onye ọrụ ubi ahụ na-aghọ onye ọchụnta ego ọ bụla ma nata akwụkwọ ikikere kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ dị mma:
akụ na ụba nke mmadụ (ọ bụghị na azụmahịa);
ubi ugbo ala (choro itinye aka nke ndi otu).
Ndị enyemaka ga-ahọrọ ndị mmadụ maara ma hụ ịhụnanya na nyochaa anụmanụ. Ọ dịkwa mkpa ịṅa ntị n'àgwà onwe onye (ọrụ, ịdọ aka ná ntị).
Maka ìgwè ehi iri abụọ na abụọ, 2-3 ndị inyeaka zuru ezu. Jide n'aka na ị nwere onye ọrụ mkpara. Nke a nwere ike ịbụ ọnọdụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ onye ọkachamara a kpọrọ.
Ego mbụ na-aga na ndokwa nke n'ọba, ịzụta ihe ndị na-eto eto na ịzụta nri. Ná nkezi, ọ ga-eru 500,000 rubles imeghe ugbo na-etolite otu ìgwè nke isi 20.
Ọnụ nri ga-abụ ruru puku iri abụọ kwa afọ maka otu ehi. Mgbe e mesịrị, a ga-enwe ụgwọ ndị ọzọ: mini-traktọ, refrjiraeto, feeders.
Ntị! Inwe ego mbụ ga-akwụ ụgwọ n'ime ọnwa 16-18. Onu ogugu nke uru uzo - site na puku dolla kwa afo.
Ihe ederede nwere ihe mgbaru ọsọ, ntụziaka nke ọrụ, ngụkọta ego na uru. Atụmatụ azụmahịa maka ịzụlite oke ehi maka anụ, ịzụlite na ịchekwa otu ìgwè nke ihe mgbaru ọsọ 20 gụnyere mmefu ndị dị otú ahụ:
Ịzụta ngwaahịa na-eto eto.
Ịkwụ ụgwọ na nhazi nke agbata.
Ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na ịchịkwa nri.
Ọ bara uru ịmụba gobies maka anụ? Ebere ego nke ugbu a na-atụle ego. A ghaghị itinye ego a na-atụ anya ya na oge nke ịkwụ ụgwọ azụ na nke zuru oke na atụmatụ azụmahịa.
Nwa ehi na-eto eto maka anụ bụ ụzọ dị irè. Cheta na ọrụ dị otú ahụ chọrọ oge, ego na mgbalị anụ ahụ. Site na nkwekọrịta kwesịrị ekwesị na nkesa nke ọma, ị nwere ike ịmepụta onye ahịa ma nweta ego.
Altai ịnyịnya ìgwè: àgwà, nlekọta na nlekọta
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu otu esi amalite ehi oke ozu maka anu dika ahia? Atụmatụ na nzukọ nke ikpe ahụ